AI4COVID-19, chirongwa cheAI-chakavakirwa muchikamu chekuyedza kupa pekutanga kuongororwa nekuongorora kukosora | Linux Vakapindwa muropa
AI4COVID-19, chirongwa cheAI-chakavakirwa muchikamu chekuyedza kupa pekutanga kuongororwa nekuongorora kukosora
Iyo Coronavirus denda (Covid19) iri kukonzera nyonganiso pasi rese uye panguva imwechete yakatarisa munhu wese kuti ashande pamwechete kuti vakwanise kukurira dambudziko iri. Uye ndezvekuti vanhu vanobva kumatunhu ese vatanga kupa uye mune programmers uye nenzvimbo yehunyanzvi, ivo vari kutarisawo kwavo kwese kuedza kwavo kupa neiyo diki tsanga yejecha.
Uye ndeyekuti pamwe nehuwandu hwevanhu vanobatwa uye vakafa nekoronavirus nyowani inoramba ichiwedzera kutenderera pasirese. Pari zvino, kurwisa chirwere ichi kunosanganisira kushandiswa kwehungwaru hwekugadzira.
Zvechokwadi, Vashandi vari muchikamu ichi vari kukwanisa kugadzira maturusi akasiyana siyana iyo inobvumidza, kunyanya, kukwidziridza kuongororwa kwevarwere kana kutapukirwa noutachiona kwenzvimbo dzakasviba, kutsvagurudza kwemishonga kana kuona.
Pane ino yekupedzisira poindi, timu yevaongorori kubva kumayunivhesiti eK Oklahoma (U.S), Kharkiv (Ukireni) uye Michigan (USA) ivo vakakwanisa kugadzira nharembozha izvo zvinofungidzirwa inobatsira pamwe nekuongororwa kwecoronavirus nekuda kwekuongororwa kwenzwi rekukosora kwemushandisi.
Izvo zvakakosha kutaura izvozvo iyi purogiramu iri mukuedzwa kwemukati uye yeiyedzo vhezheni haina kuburitswa kuruzhinji, saka ivo vakangoburitsa chirevo pane zvayakaita kusvika ikozvino.
Iko kusakwanisa kuita bvunzo pachikero rave iro Achilles chitsitsinho muhondo inopfuurira yevanhu yekurwisa denda re COVID-19.
Chiyero chinogumbuka, chinotyisa uye chinodhura, chinoshandiswa pasirese yepasirese, chinogona kuita semushanduri wemutambo muhondo iyi. Kugadzirisa dambudziko iri, tichivakira pamhedzisiro inovimbisa yebasa redu rekare pakukosora-kwakavakirwa kuongororwa kwezvirwere zvakasiyana siyana zvekufema, takagadzira yeArtificial Intelligence (AI) -yakayedzwa yekutanga kuongororwa kweCOVID-19.
Muedzo unogona kuitwa pachikero kuburikidza neye mobile application inonzi AI4COVID-19. Iyo AI4COVID-19 kunyorera inoda 2-yechipiri kukosora zvinyorwa zvechinyorwa. Nekuongorora sampuli yekukosora kuburikidza neinjini yeAI inomhanya mugore, iyo app inodzosera yekutanga kuongororwa muminiti imwe.
Nehurombo, kukosora chiratidzo chinowanzoitika cheanopfuura makumi maviri nemaviri mamiriro ekurapa asina hukama neCOVID-19. Izvi zvinoita kuti kuongororwa kweCOVID-19 kubva mukukosora wega dambudziko rakaoma zvakanyanya.
Isu tinogadzirisa dambudziko iri nekugadzira inoverengeka yakawanda-murevereri-yakatarisana nenjodzi-inokanganisa AI dhizaini iyo inoderedza kusanzwisisika. Panguva yekunyora, yedu AI injini inogona kusiyanisa pakati pekukosora kwevarwere veCOVID-19 nemhando dzakasiyana dzekukosora pasina COVID-19 ine inopfuura 90% kunyatso. AI4COVID-19 mashandiro anogona kuvandudza sezvo data rakawanda uye zvirinani richiwanika.
Kana iyo app ikaona kurira kwekukosora, inopfuudzwa kumatatu masystem masisitimu yakafanana uye yakazvimirira: iyo yakawanda-kirasi classifier yakavakirwa pakudzidza kwakadzika (DL-MC), iyo muchina kudzidza kwakavakirwa akawanda kirasi classifier zvekare (CML-MC) uye iyo kudzika kwakadzika-kwakavakirwa bhanari classifier (DL-BC).
Vatsvagiridzi vakabatanidza yekukosora detector muAI injini yavo, iyo inokwanisa kusiyanisa ruzha kubva kune makumi mashanu emamwe maungira anowanzoitika.. Kuti vadzidzise uye kuyedza iyo diagnostic system, vakaunganidza matanda akasiyana siyana: 48 COVID-19, 102 bronchitis, 131 kukosora uye 76 kurwisa kukosora kwakajairika.
Mhedzisiro yevatatu classifiers inoendeswa kumurevereri. Kana ivo classifiers vakasabvumirana, iyo app inoratidza kuti iyo bvunzo haina kuenderana. Zvikasadaro, iwo matatu classifiers anoshandisa nzira dzakasiyana dzinozove dzakagadziriswa-kuyananiswa, zvichitungamira kune maviri mhedzisiro (yakanaka kana yakaipa).
Vagadziri vayo taura kuti AI4COVID-19 haina kugadzirirwa kukwikwidza nemiyedzo makiriniki ari kuitwa munyika dzese.
Pane kudaro, ivo taura kuti vavariro yavo ndeyekupa inowirirana nhare-yekuyedza chishandiso Inotakurika chero nguva, chero kupi, nechero ani, saka kuongororwa kwekiriniki uye kurapwa kunogona kuendeswa kune avo vanozvida zvakanyanya, kuchengetedza hupenyu hwakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » AI4COVID-19, chirongwa cheAI-chakavakirwa muchikamu chekuyedza kupa pekutanga kuongororwa nekuongorora kukosora
Kutenda kune vanogadzira, isu tinoda vanhu vazhinji vakaita saivo